JINGHPAW KASA: ကချင်လူမျိုးများ၏ စိတ်ဓါတ်နှင့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
၁။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်ပေါက်စ မင်းအောင်လှိုင်တို့ ဦးဆောင်ပြီး ကချင်လူမျိုးများကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းနိုင်ရန် မီးကုန်ယမ်းကုန် လူအင်အားမျိုးစုံအသုံးချပြီး တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိနေပါသည်။
၂။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် မင်းအောင်လှိုင်တို့နှစ်ဦးသည် အာဏာရှင်နေ၀င်းနှင့် သန်းရွှေတို့နှစ်ဦး၏ တပည့်ရင်းပီပီ အာဏာရှင်စနစ်အမွေဆိုးကို ထိန်းသိမ်းရင်းအားဖြင့် ရုရှားစစ်တိုက်လေယဉ်များ၊ မြောက်ကိုးရီးယား လက်နက်ကြီးမျိုးစုံနှင့် လူအင်အားရှိသမျှ သိမ်းကြုံးအသုံးချပြီး ကေအိုင်အေကို ဖိတိုက်နေခြင်း။
၃။ ကချင်လူမျိုးအမျိုးသမီးများ အဖွားအိုများပါမကျန် မုဒိန်းကျင့်သတ်ဖျက်ခြင်း၊ နေအိမ်များ၊ ဘုရားကျောင်းများအားလုံးကို မီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း၊ ရာဇ၀တ်မှုမှန်သမျှကျူးလွန်ပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းထဲ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေခြင်းများကို အဆုံးသတ်စေရန်။
၄။ ဒီမိုကရေစီအရေခြုံ ဦးသိန်းစိန်နှင့် စစ်အာရှင်ပေါက်စ မင်းအောင်လှိုင်တို့သည် အာဏာရှင် သန်းရွှေ၏ စေခိုင်းမှုဖြင့် တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်ပြီး
- ကေအိုင်အေကိုလည်း (၁၀) ရက်အတွင်းအပြီးအပိုင်ချေမှုန်းပစ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
၅။ ကေအိုင်အေတပ်မတော်နှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော်များသည် အာဏာရှင်သန်းရွှေ၏ လက်ပါးစေ တွေကို ရဲရင့်ပြတ်သားခိုင်မာသောစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ခုခံတိုက်ခိုက်လျှက်ရှိပါသည်။ စစ်တိုက်လေယဉ်များသာ မပါဝင်ခဲ့သော် အပြီးသတ်ချေမှုန်းနိုင်မည်ဟု တွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၆။ ကေအိုင်အို၊ ကေအိုင်အေနှင့် ကချင်လူမျိုးများ၏ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ အာဏာရှင် သန်းရွှေနှင့်အတူ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယား တစ်ခုလုံးကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ ချေမှုန်းရှင်းလင်းပစ်ပြီး ၎င်း၏ နေရာတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အစားထိုးတည်ထောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိအလင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။
၇။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုအချိန်မှစ၍ စစ်အစိုးရကိုမုန်းတီးရွံ့ရှာနေသည့် တိုင်းရင်းသားများအားလုံးနှင့် အဖိအနှိပ်ခံဗမာလူမျိုးများအားလုံး UNFC တပ်ပေါင်းစုနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး သန်းရွှေကြိုးကိုင်ထားသော အစိုးရကို တိုက်ခိုက်ခြေမှုန်းပစ်ကြပါစို့။
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ ဗမာစစ်အစိုးရ တနေ့ ကျဆုံး စေရမည်။
Khunohn Tangbau said...
Tara n lang ai ni gaw K.Kaje yang ai hkrum na re.
Myu sha nieK.K kaw law hput di di ga!!! Anhte ni gaw yawng hpe dang ai lu ai Hpang Wa Ning Sang Chye Wa Ning Chyang Hpe kam sham ai .K.Kakashu kasha ni rai ga ai re ma jaw myu sha niatsing yam tsing dam hpeemaroi n ni ma sin n si ai myit hte shakut sha rang ga!!Dai ni KIO gaw mung shawa ngwi pyaw lam hte mung shawa nga mu nga mai lam de woi awn nigng shaw taw nga ai re ngu ai hpe mung myit dum nga ga law.
Dai ni NLD hte Awng San Kaw mung anhte myu sha niahkam sha ngai thingyam tsing dam ni hpe LUT DAW hta hpa tsun ai lam nga ai hpe yu yang Myen gaw Myen sha re hpeasan sha mu lu nga ai. Shan hte sha da ganinng rai ga ra hku myit hkrum ai lam ni hpe mung Media ni hpe tsun ai lam n nga ai. AnhteaAwng Padang K.K kaw sha manoi kam hpa let Jet ai Mung masa lam yan ni hpe Hkritstu hta gaw gap sa wa ga law.
Dai ni na ten hta gaw Mungkan shara shagu hta chyam bra nga ai an nau ni yawng Mung masa lam yan hta tinang tsap ai sha ra hta grak rai tsap nna yawng myit langai sha jawm shabawn ra sai law. Makam masham hpun ni mung nang ngai nang shoi nang sha tsun ja hpyak hkat taw nga lam n galaw ai sha nang ngai kadai re ngu ai hpe myit dum let dai ni na ten mung masa bawng ban lam ni galaw hpang wa nga ai hpe ngun jaw let Anhte Myu sha niaNingbaw ni jaw kaja hkrak dik htum ai mahkrun hte woi awn lu mu ga ja ja K.K hput di di let ap nawng ga law.
UN,USA,EU,RUSSIA,CHINA, ni hte kaga n gun ja mung dan ni kadai n garum tim anhte hpe garum na Yehowa Karai Wa nga ai hpe myit dum let Ngun da ting let myiit n den marai hpe sha ja nga ga law!!!
ngai gaw lashu bu ga hkanan daw kaw nga ai ahadang tang gun re.An hte myu sha ni hkam sha hkrum nga ai sinyamamatu sanat hpai let nlu ap nawng timung K.K kawakyu hpyi garum nga nngai.Nu wa hpung masha ni hte shawng lam hta ap nawng nga ai myu tsaw share shagan ni hpe ndai shara kaw na ngun jaw mayu ai gaw (Israela)myu masha ni gaw အင်ပါယာ manga re nga ai (မေဒိ၊ပါရှန်၊အီရတ်၊gari၊roma)nianpu hta shaning 1800(or)1900 daram up hkang hkrum timung mung dan nmat ai hta nga,dai ni na aten hta mung kan ntsaerwt jat ai hte kaga mungdan ni hta grau nna hpa ji tsaw ai amyu lagai rai wa sai.Rai timung dai gaw shan hteaatsam hte nre ai sha K.K lata la hkrum da ai amyu re ai majaw she rai nga ai.Dai hte maren an hte W.P myu sha ni mung K.K lata la hkrum ai amyu re majaw gara hku re ai tsin yam hpe hkrum nga timung awng dang na hpe chye da ra ai.john(2;1)kaw nna hti yu yang ka na mare na hkung ran poi hta sabyi nsin ma mat ai rai timung dai poi hta sbyi nsin ma mat ai mang hkang sha nga ai nrai ,sabyi nsin ma mat ai mang hkang hte rau Yesu mung nga ai hpe chye lu nga ai.De majaw masha galaw da ai tsbyi ma mat yang K,K galaw ai tsbyi lu lu na hpe Yesu ga sadi jaw nga ai.Shawng nnan an hte yin la ra ai gaw an hteaatsam hte galaw da ai tsabyi nsin ma mat sai rai nga ai.Dai hpangenang K.Katsabyi nsin hpe mu lu na teng nga ai.(myu sha ni hpe myit dum letshadang Nhkum tang gun la shu)
TEAM WORK.. yaw...TEAM WORK..., Jinghpaw ngu ai pyi rai n-pra kaw n-na.. Israela Masha ni Yehowa God hpe Kamsham ai a-myu. God Shi nan lata la ai a-myu re .. Dai ni mung Yehowa God. hpe kam sham nga ding yang rai nga ma ai...Israela a-TEAM WORK Jing hku gaw ka dai ta... ?USA.. gaw madung rai nga lu ai... USA..lu ai Laknak mahkra ngu na gaw... Israela a-myu ni kaw nga ai... Anhte KIO.. KIA.. hte Jinghpaw Wunpawng Myusha ni a-matu mung Sinna Mungdan na Mungdan langai ngai rai nan rai ra ai...,Dai hpe Shing gan Mungdan du nga ai Myusha ni hte. KIO.. KIA.. lata gin dun let.. Byin hkra chyawm galaw sa wa ra na re.... UWSA.. a-TEAM WORk.. gaw CHINA.. madung rai nga lu ai....,Myen wa n-gwi sa hkra ai....Myen a- TEAM WORK.. gaw. CHINA. NORTH KOREA. RUSSIA.. rai nga lu ai...,